‘အစွဲ’ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » ‘အစွဲ’
Posted by lone on Aug 4, 2011 in Science & Religion | 14 comments
အစွဲ လို့ပဲပြောရမှာ ပေါ့နော် ။
အောက်မျက်ခမ်းလေး နဲနဲလှုပ်ပြီဆိုရင် နမိတ်မကောင်းတတ်ဖူးလို့ကြားဖူးထားတော့
ဘာများဖြစ်တော့မလဲဆိုပြီး ရင်တထိတ်ထိတ် ဖြစ်ရတယ် ။ အထက်မျက်ခမ်း လှုပ်ရင်တော့နမိတ်ကောင်းတယ် ဆိုပြီး ဘာများ ဖြစ်တော့မလဲပေါ့နော် ။ အဲလိုပဲ
သူများတွေကို မေးကြည့်တော့ လည်း မဆိုင်ပါဘူး အကြောလှုပ်တာပါလို့ဆိုကြပေ မယ့် မသိစိတ်က အစွဲလေးတစ်ခုလို စိုးရိမ်စိတ်လေး တစ်ခုတော့ ရှိမြဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။
အဓိက ကတော့ ဘုရားဖူးဖို့ကြောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။” ကျောက်တော်ကြီးဘုရား
ကို ချစ်သူနဲ့ အတူ မဖူးနဲ့ ကွဲတတ်တယ်” တဲ့ မယ်လမုဘုရား၊ကျိုက်ဝိုင်းစေတီ ၊ ရေလည်ကျောက်တန်း၊ ကျိုက်ခေါက်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင် …. စသည့် ရန်ကုန်က ဘုရားများကို တူတူသွားမဖူးရဲသည့် အစွဲကတော့ အဆိုးဆုံးပါပဲ ။ တော်သေးတာက
ရွှေတိဂုံမပါဘူးတဲ့ ။ရွှေတိဂုံတော့ သွားခွင့်ရှိသေးသည်။ အမလေး ဆိုးလိုက်တာ၊
အဲ့ဒီ့ အစွဲ တွေက အမှန်တကယ်ကော ဟုတ်ပါရဲ့လား။ ဘုရားတူတူဖူးလိုက်တာနဲ့
ကွဲရောလား ။ မယ်လမုဘုရား ရှေ့ဖြတ်သွားလို့ သူကလက်အုပ်ချီရင် ကိုယ်က မချီ
ရဲ တူတူဖူးသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့လေ ။ etone မမကတော့ အဲဒီ့အစွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့
နဲနဲခပ်ဆင်ဆင် ရှင်းပြထားတာတော့ တွေ့ဖူးထားတယ် ။ အခုလည်း mandalay gazette အဖွဲ့သားအားလုံးရဲ့ အစွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းလေး တွေသိများသိရင်
ဟုတ်ပ အစွဲအလန်းတွေက အများကြီးပဲ ယုံနေရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့
ဒါဆိုရင်လဲ ခုနကပြောထားတဲ့ စုံတွဲတွေသွားရင် ကွဲတက်တယ်ဆိုတဲ့
ဘုရားကိုသွားဖူးပြီးရင် ရွှေတံဂုံဘုရားက ရှင်မကွဲ ဘုရားကို သွားဖူးလိုက်
ရှင်တုန်း ဘယ်တုန်တော့မှ မကွဲဘူးဆိုလားပဲ ကျေသွားတာပေါ့နော် …
နွယ်ပင်ပြောသလိုဆို ကွဲမယ့်ဘုရားဖူးပြီးရင် မကွဲမယ့်ဘုရားပြေးဖူးလိုက်နဲ့ လုံးလယ်ချာလည်လိုက်တော့မယ် ထင်တယ်
တော်တော်ခက်ကြတယ်။ ဘုရားဖူးလို့ ကွဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူ ဘယ်သူကများစခဲ့ပါလိမ့်။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံကိုတော့ ပြန်မကြည့်ကြပဲ လွယ်လွယ် ဘုရားကိုပဲ အပြစ်တင်ချင်နေကြတယ်။ ဘုရားက ငါဘုရားကို ဖူးသောလင်မယား ၊ သမီးရည်းစားများ ကွဲစေသတည်းလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မဟောခဲ့ပါဘူး။
ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုများသွားလိုက်ရင်တကယ် ဖြစ်သွားမလား ဆိုပြီးတော့ပါ။ အဲဒါကြောင့်လဲ အစွဲလို့ပြောခဲ့တာပါ ။
ဟုတ်တယ် နော် ၊ အစွဲ ဆိုတာ တော်တော်ကြီး ဆိုးတယ် ဗျ ၊ ချွတ်ရခက်တဲ့ အမျိုးလို ့ပြောချင်တယ် ဗျာ ။
မန်းတလေး မြို ့မှာ ဆိုရင်လည်း ရှိတယ် ။
ရန်ကင်းတောင် ကို စုံတွဲ မတက်ရဘူး ၊ ရေတံခွန်တောင် ကို စုံတွဲ မတက် ရဘူး
တက်ရင် ကွဲတတ်တယ် အစရှိသဖြင့် ။
ဘယ်စုံတွဲ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
အဓိက က ၊တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက် ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းသာလျှင် အဓိက ကျ ပါတယ် လို ့မြင်မိပါတယ် ဗျာ ။
ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် သစ္စာ မရှိတဲ့ အချစ်ကြောင့် ကွဲကျ ရတဲ့ အဖြစ်ကို ဘုရား တို ့ဘုရားစေတီ ရှိတဲ့ တောင် များ ကို အကြောင်းပြ တာ က တော့ မကောင်းဘူး ပေါ့နော် ။
အကောင်းဆုံးကတော့ ယုတ်တိလည်းမရှိ ကိုယ်လည်းအမှန်တကယ် စမ်းစစ်လို ့
မရနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခေါင်းထဲမှာ ထည့်သိမ်းမထားမိပါစေနဲ ့…
အဲ ့ဒီအချက်အလက်တွေက ခေါင်းထဲ မှာ ထည့်ထားမိရင် ပျောက်မသွားပဲ မသိစိတ်ထဲ
ရောက်သွားခဲ ့ရင် အစွဲ ဖြစ်စေတတ်လို ့ပါ။
ကိုယ်ကတော့အောက်မျက်ခမ်းလှုပ်တာကိုမကောင်းဘူးလို.ယုံပါတယ်။ သူများတွေအတွက်ဘာမှမဖြစ်ဘဲနေချင်နေမယ်။ ကိုယ့်အတွက်ကတော့တခုခုမပျော်ရွှင်စရာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာအချက်ပေးနေတာပါဘဲ။ ဒါကကိုယ့်အယူအဆ၊ ကိုယ်နဲ.လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အီရတ်တယောက်ကတော့ သူတို.အယူအဆကတော့အထက်မျက်ခမးပါတဲ.။ သူကသူ.အတွေ.အကြုံတခုကိုပြောပြပါတယ်။သူ.အပေါ်မျက်ခမ်းကိုခပ်ပြင်းပြင်းလှုပ်ပြီး၄ရက်၅ရက်အကြာမှာသူ.ရဲ.ဦးလေးနဲ.သားဟာကားအက်စီးဒင့်အခုကြောင်.ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်တဲ့သတင်းကြားခဲ့ရတယ်လို.ပြောပါတယ်။
ကျန်သေးတယ်ဗျ ဦးပိန်တံတား တူတူသွားရင် ကွဲတက်တယ်တဲ့လေ………
ရှောင်ရမှာ နောက်တစ်ခုတွေ့ပြန်ပြီ ….
အဲ့လို နေရာတွေသွားရင်ကွဲတယ်လို့ ဘယ်သူတွေကများ လက်သင့်ခံ ပြီး ပြောလာကြလဲမသိဘူးနော်။
အခုတော့ ချွတ်လို့မရတဲ့အစွဲကြီး လိုဖြစ်နေပြီ။
မယ်လမု ဘုရားမှာနေတဲ့ အစောင့်နတ်တွေ ( ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကွဲကွဲပြားပြားနာမည်မတပ်နိုင်လို့ နတ်လို့ပဲပြောမယ်) ကမောင်နှမတွေလို့ပြောတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မကျွတ်မလွတ်နိုင်လို့ နဂိုကလည်း သမာဒေဝတွေဖြစ်တဲ့ အားလျော်စွာ ဘုရားအေးရိပ်မှာ လာခိုနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့ကမောင်နှမတွေလည်း ဖြစ် ရှေးလူကြီးတွေလည်း ဖြစ်တော့ ခေတ်အမြင်နဲ့မတူဘူးပေါ့။ စုံတွဲတွေဘုရားမှာ အနေအထိုင်မတတ်တာကို အမြင်ကပ်လို့ သူတို့တန်ခိုးနဲ့ ဒဏ်ခတ်တဲ့ သဘော အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်တာလို့ ပြောကြတာကြားဖူးပါတယ်။ တခြားဘုရားတွေတော့ မသိပါဘူး။
ဘုရားအတူသွားလို့ ကွဲသည်ဖြစ်စေ၊ ပေါင်းရသည်ဖြစ်စေ အနေအထိုင်တော့ ဆင်ခြင်စေလိုကြောင်းပါ။
ဘယ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ် စုံတွဲသွားဖြစ်ရင်လည်း အိန္ဒြေနဲ့ နေပေါ့။ ကိုယ်အနေအထိုင်မတတ်ရင် နတ်မကိုင်လည်း ဘုရားဂေါပက နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
အူကြောင်ကြောင်နဲ့ အတွေးတွေပါ … ကံပါလာလျှင် ဆုံမှာပဲ.. ကံကုန်လျှင် ကွဲမှာပဲ ဒါကို. .. ဘာမှ ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးလေ … ဒါပါပဲ .. ။